सहमति गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको सुझाव
जेठ १६ – राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दलहरुबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई सुझाव दिनुभएको छ । मंगलवार विहान शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति यादवले आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई सहयोग रहने बताउँदै दुवै संस्था संवैधानिक मर्यादा कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले आफुले सबै हिसाबले सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समझदारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भट्टराईले सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गर्दै अगाडि बढेर राष्ट्रिय सहमतिको वतावरण बनाउन आफुले प्रयास गरेको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रयासमा सहयोग गर्न राष्ट्रपतिसित आग्रह गर्नुभएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्रीले आउँदा दिनमा सहमतिको बाटो खोज्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको उहाँको नीजि सचिवालयले जनाएको छ ।